Kuphi ukufumana imephu yeHonduras - Geofumadas
Matshi, 2008 ArcGIS-ESRI, Iiphotography
Abantu bahlala bekhangela imifanekiso yelizwe labo, amaziko anxulumene nokulawulwa kwemimandla, nokuba ngaba kuthengiswa, kwi-depositary okanye ekwakheni izinga, bahlala benendawo apho baxelela idatha yabo. Kule meko ndiza kuthetha ngeHonduras, kuba i-Google Analytics ithi kukho iiHonduras ezifakela kule ndawo ngenxa yezizathu ezifana nale, kwaye ngenxa yokuba zidibana no-Alvarezhn kunye neHonduras, hehe.
Nangona kukho iinkcukacha ezininzi kwiziko likarhulumente, indawo apho unokufumana khona ... kwaye unokukwazi ukuba baqhubeka bekhula kukuba:
Inkqubo yeSizwe yoLwazi lweNdawo (SINIT)
Le Ngokomzekelo, ukuba nangona indalo kwalo yakutshanje kuyingenelo kwixesha elizayo, njengoko iziko eligunyazisiweyo ngumthetho ukusetyenziswa komhlaba ukuze bazise iinkcukacha zokuzoba nomdla jikelele kunye akhokele eminye imithetho ezinjengentsebenziswano Commission Data uphakathi apho space (CIDES). Nge ubunkokeli olululo mali olwaneleyo phakathi kwamaziko iqabane ibe kwengalo yasekunene ngenjongo wokupapashwa kwe-National Geographic Institute, apho kukho kakhulu umona kwinqanaba lobuchule kunye nomgaqo-nkqubo resource kule ngingqi.
I SINIT Akujongwanga ukuba ibe umzekelo ukudala mapping, kodwa kunokuba ukulawula imisebenzi 'amaqabane esebenzayo' amaziko kwaye ukudala nokuhlaziya iinkcukacha ezingomhlaba. Umthetho-siseko engundoqo efanayo kumazwe aliqela Latin American: ukuthintela uphindaphindo lotyalo-mali karhulumente kunye nawabucala bebutha ulwazi esele ikhona, ukuba efanayo kakuhle esetyenzisiweyo akhokele ilizwe lolawulo kakuhle-integrated indawo.
Nangona i-SIN ijoliswe kwi-Intranet yamaqabane asebenzayo, enye yentuthuko eyenziwe kwiwebhu ingafumaneka kwi-intanethi. Phakathi kwabanye, ikhathalogu igcina ulwazi kule zididi zilandelayo:
Iingcamango kunye neMithombo yeNdalo.
Izibonelelo kunye nezixhobo zoLuntu.
Iinkalo zeNtlalo nezoqoqosho.
Kuyinto eyenziwe kakubi (ngokwemigangatho ye-aesthetics) kwaye njengokuba urhulumente ngokuqhelekileyo wehla ngezikhathi ezithile okanye izikhonkco zawo zikhumbuza ukuba umntu akayilayishi ezinye iinkonzo, kodwa yena, ndiyathemba ukuba bayaqhubeka. Xa ukhetha uluhlu, (kufuneka) ukuba imephu imele ibonise ngesimo somfanekiso, kunye neengcamango kunye nesakhelo.
Kule nto bayeke, kungekhona ngenxa yokuba abanakuqala oko sikubonayo, kuthathele iintsuku ezimbalwa ukuba bangabikho ... kwaye nangona bengenzi okungakumbi ubuncinci kuvumela iziseko zenkonzo ... kwaye ngokukodwa ukukhutshelwa kweziqendu. ngokukhawuleza
Unayo izixhobo ezisisiseko zophuhliso kunye ne-ArcIMS, kunye ne-template esezantsi kodwa imisebenzi yayo ivumela ukulayisha iindawo ezininzi kunye neqhosha lokugqibela, kwaye ukubonisa ulwazi oluyisiseko (nangona kungenakulungelelaniswa kokuthunyelwa) ... kodwa ungalilahli khuphela i icon, ngenxa yale misebenzi ukhuphela umgca ogqityiweyo obonakalayo kwifom ye-zip. Iifayile ezixinyiwe zi .dbf, .shp kunye .shx; yonke i-cartography i-UTM Zone 16N i-WGS84 xa ungayifumani ireferensi kwimethadatha.
Ngoko ke ukuba ufuna data Honduras kwifomathi .shp, le nto. Xa inkampani kokubonisana malunga neenyanga ezintathu, a anomdla incasa elungileyo kunye isibini developers idibanise ezinye oomaleko (cadastral, yeraster kunye ordenamieto kagunyaziwe) ... kwaye inshorensi ube portal okuyo okulungileyo kunqaba kuye amazwe zethu kokufika.
Ngoko ke ndikhuthaza ama-catrachos ... ukuba onke amazwe enza le migudu siza kuba namathuba angcono okuphuma ngaphandle kophuhliso. Ndiyavuma ukuba bekukuhle ukuzonwabisa nemihlaba yabo, benze izihlobo ezilungileyo kwaye bathabatha iifoto ezininzi xa ndihamba ngeendlela zabo zoomasipala abahle.
Eminye yale migudu yashiywa, kwi-2010 ifunyanwe kwisakhelo soNobhala weCwangciso, ngoko ke iqhutyelwa nguMlawuli oyiNtloko woLawulo loMhlaba.
Kwakhona kwi-portal yeCenrut ungayifumana imephu yeGPS yeHonduras naseMntla eMelika.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuzivelela kwelizwekazi kwiGoogle Earth
Post Next I-Georeference i-map dwg / dgnOkulandelayo "
Izimpendulo ze-8 "Kuphi ukufumana imephu yeHonduras"
UJacobo Borjas uthi:
Molo, ungandinika inombolo yokucela imephu okanye yeyiphi inkqubo ekufuneka uyilandele
UMTHETHO WENKQUBO RODRIGUEZ uthi:
Ndicela uncedo ukufumana imephu kamasipala waseSanta Barbara
Ngokwenyani, kubonakala ngathi isondlo.
Ayikho enye indlela yokulinda okanye ukuya esikhungweni (iTeguicgalpa, eHonduras)
Edinson Felix Michue Osorio uthi:
Ukubulisa, zama ukufaka iphepha lewebhu kwaye kukulungiswa, unokunceda ngokundinika ulwazi malunga neemephu ze-Honduras. Ndiyabonga
JUAN BLAS ULLOAULLOA uthi:
Yinyaniso oko ikutshoyo OLVINA kuba lithuba lam ukuba afundise iJografi eduction kwaye Kulilishwa ukuba nkqu iimephu ukuba kwi web unani iimpazamo iintloni kunye neencwadi dis ezintsha esinika nguNobhala of Education kwakhona abonakale Ukubulala kwendawo zesebe, kuzwelonke, zengingqi nezehlabathi ngokubanzi, kwaye oku kukuba endaweni zokuqasha beemaphu zisebenzisa iimephu cartoonists, ukuba amajoni kufuneka, kodwa inkxaso yezoqoqosho iyafuneka kwaye professional ukuba ikhona kweli lizwe, kodwa ke njengoko abezopolitiko ukuba akunjalo, hayi baqeshe, yaye kwelinye nesenzeko icala zokuzoba nisazi, ngokuba UKHUSELEKO kuZwelonke kodwa ayivelanga iimephu ezilula: ES geopolitics.
libale i-murillo uthi:
KWI-HONDURAS AKUBA ICANDELO LENKQUBO YENKQUBO, AMAPOLITIKI AYAVELA UKUBA AQHUBEKILEYO OKUQHUBEKILEYO UKUZIPHUMA.
AMAKHULU AYIQHUBA IZIXHOBO EZINYE, NGAKHO IMICIMBI YENYOGRAPHIC AYINYE IZIHLOKO EZIKHULULEYO.
UKUSEBENZA KUNYE UKUQALA KUNYE KWE-TOLERANCE, KUBAQHUBEKA UKUQHUBA UKUPHATHWA KWENKARTOGRAPHY-
IXESHA ELIKHULU KWE SIKHONO ESIKHENZISWA NGABASEBENZI BASE-MILITARY OJALA, BAZOKUBUYA KWI-DIRIJIRLA.
INKOSI YENKQUBO YENKQUBO YENKQUBO YENKQUBO YENKQUBO YENKQUBO YENKQUBO, YI-INTANETHI.
ISEBE LEZITHILI ZEZITHILI ZEMGN, ITHELA UKUBA KUNYE.
IXESHA KWIMVELISO yekari CARTOGRAFICA, yiminyaka emithathu nexesha MONTHS 6 YECHANEKILEYO, esibonisa ukuba kwenzeka igqabi KUPHELA xa eshiya uluntu kwaye iphelelwe.
mariana loaiza usuga uthi:
Molo, unjani? Bendihlala nabazali bam, ndiyakuthanda kakhulu Mariana